Maxaa loola jeedaa marka haweeneydu indhaha ku eegto | Ragga Caqliga leh
Alicia tomero | 31/07/2021 10:13 | Lamaanaha iyo Galmada
Waa hubaal inaad waligaa maqashay “indhuhu waa muraayadda nafta” waana sababta oo ah sabab badan baa ku jirta. Ficil ahaan indhuhu waa habka isgaarsiinta inta badan noolaha oo dhan waxaana laga yaabaa inay sabab u tahay inay jiraan wax sixir ah oo iyaga ku saabsan. Marka qofku fiiriyo mid kale waa sababta oo ah wuxuu rabaa inuu raadiyo nafta qofka kale taasna haweeneydu micnaheedu waa wax badan, gaar ahaan marka indhahaaga ku dhuganaya.
Haddii aad heshay naagtaas aad jeceshahay iyo laga yaabee Had iyo jeer waxaan ku raadsadaa indhahayga, Waa inaad ogaataa in ujeeddooyinka lagaa leeyahay ay wanaagsan yihiin. Waxa ugu quruxda badan ayaa ah in la waafajiyo muuqaalka iyo dhoolla -caddaynta, ugu yaraan ku habboon tilmaam jirka oo wanaagsan. Laakiin haddii aad rabto inaad ogaato waxa tafaasiil kasta micnaheedu noqon karo, dhug u yeelo.
1 Maxay ka dhigan tahay marka haweeneydu indhaha ku eegto?
1.1 Wuu ku eegayaa, wuu ku eegayaa oo wuxuu taabanayaa timihiisa
1.2 Eeg haddii dabeecadiisu isbeddesho markaad ag joogto
1.3 Maxay ka dhigan tahay markaad ka fogaato araggiisa?
2 Sida loo dhaqmo marka haweeneydu ku fiiriso
Maxay ka dhigan tahay marka haweeneydu indhaha ku eegto?
Marka haweeneydu indhaha ku eegto, waa inaad ogaataa inaysan u ahayn raaxo fudud. Sida ragga habdhaqankan abuuraan dareen aamin ah iyo hab, xagee calaamad cad u tahay in soo jiidasho jirto.
Dadka waa la soo jiidan karaa, laakiin jaceyl ma aha, waxayna noqon kartaa calaamad muujinaysa fiiro gaar ah bay siinayaan ku jira qofkaas si aan u lumin faahfaahinta. Marka haweeneydu ay indhaheeda haysay muddo dheer, waxaa hubaal ah inay muujineyso wax ka badan ujeeddadeeda, waana soo jiidashadooda.
Qof kasta oo qof fiiriya wuxuu daaha ka qaadaa inay yihiin aad isku hubo iyo inta badan caadi ahaan waa mid aad u daacad ah. Maxaa dhacaya marka isaguna dhoolla caddeeyo? Kaas oo aan shaki ku jirin maxaa yeelay wuu ku jecel yahay iyo doonayo inuu xiriir kula sameeyo.
Haddii intaad sheekaysato waxaa jira wax ka badan isbarasho, waxaa jira kalsooni badan, daacadnimo iyo korkeeda in aad is taabataan, shaki la’aan soo jiidashada labada aad uga badan intii loo adeegay. Muuqaaladu sidoo kale waa inay la xiriiraan nooca shaqsiyadda, laakiin haddii aad hesho naag xishood badan oo si aad iyo aad u badan kuu eegta, waxaa cad in waxay leedahay hagaajin badan adiga.
Wuu ku eegayaa, wuu ku eegayaa oo wuxuu taabanayaa timihiisa
Waxaad ku jirtaa wada -hadal oo indhuhu aad bay u daran yihiin. Haddii gabadhaas wuu ku eegayaa, dhoola cadeynayaa wuxuuna ku ciyaaraa timahiisa waxay yihiin tilmaamo aad u cad inuu ku jecel yahay. Wuxuu jecel yahay inuu taabto timihiisa oo uu aad u caddaynayo, sidoo kale tilmaam kale ayaa ah inuu timaha dhinac u jiido qoortaada daayo.
Haweeneyda xiisaha lihi mar walba way dhoolla caddeysaa, haasaaweysaa, wey ku soo eegtaa, waxay danaynaysaa in aad u dhawaato iyo duulaan booskiina. Eeg haddii markan ay muujinayso soo jiidashadeeda oo dhan iyo ayaa ballan ka dhigtay ballantaas, waxaa hubaal ah inay ka buuxdo farxad.
Eeg haddii dabeecadiisu isbeddesho markaad ag joogto
Waxaa jira dumar danaynaya ragga si aad xooggaaga u doonato. Haddii uu indhihiisa kugu xujeeyo, waa sababta oo ah wuxuu raadinayaa sida xooggan iyo ogow haddii aad leedahay dabeecad. Waxay kugula tartami doontaa indhaheeda si aad u ogaato haddii aad rabto inaad u dhowaato oo aad la hadasho.
Dumarku waa xog -ogaal aamin ahWaxay u dhaqmaan si ka duwan marka ay ag joogaan qof ay jecel yihiin. Waxaa jira dumar xannibaya ama xitaa noqon kara kuwo aad u soo jiidasho leh si ay u helaan feejignaan. Si fiican u fiiri luuqadda jirka maxaa yeelay waxaad ka heli kartaa haweeney aad u caqli badan oo aan rabin inay ujeeddadeeda caddeyso.
Maxay ka dhigan tahay markaad ka fogaato araggiisa?
Xaaladdan waxaan ka hadlaynaa gabdhaha iska ilaaliya fiirinta, kaliya lid ku ah waxa laga filayo. Haddii uusan doonayn inuu ku eego, waxay ka dhigan tahay raaxo -darro, xishood, dareen -darro ama cabsi. Xaaladaha qaarkood waxay xitaa yihiin dad aan aad aamin u ahayn ama yaa wax qarinayaan.
Sida loo dhaqmo marka haweeneydu ku fiiriso
Haddii aadan go'aan gaadhin sababtoo ah lagu qabtay adiga oo aan la dareemin waa inaad ku jawaabtaa eeg kale iyo dhoolla caddayn. Indhahaagu waa inay khiyaaneeyaan farxadda waana hab kale oo lagu hayo jawaabtaas Miyaad rabtaa inaad ogaato haddii ay jirto runtii dan? Si aad tan u samayso, waxaad isku dayi kartaa inaad ku hayso indhahaaga ilbidhiqsi ama laba si aad u aragto sida ay u danaynayso.
Haddii aad ku jawaabto isla muuqaal, ka taxaddar inaadan hayn muddo dheer, maaddaama sida aad u samaynayso ay qofka kale ku abuuri karto raaxo -darro. Waa inaad ilaalisaa hagaajin ammaan ah, adigoon noqon qof kufsi ama ilmo aan qaangaarin.
Si aan u soo gabagabeyno waa inaan sheegnaa haddii gabadhaas tdan buu leeyahay wuu ku daawan doonaa, xataa si dhuumaaleysi leh. Marka uu marba mar kuu fiirsado waa inaad sugtaa dulsaar aad u hooseeya oo uu doonayo uun saaxiibtinimo fudud. Laakiin haddii uu ku eego, waa inaad gelisaa dareenkaaga lixaad si aad u ogaato inuu jiray iyo in kale aad iyo aad u qoto dheer oo dahsoon, markaa waxaad hubaal tahay inaad hoos u dhacayso inay jirto soo jiidasho weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Maxay ka dhigan tahay marka haweeneydu indhaha ku eegto